Seagull Assistant Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android | APKOLL
Seagull Assistant Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android
Te hangataka hiasa amin'ny sambo ve ianao na hampitombo ny fahalalanao momba ny ranomasina sy ny sambo? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ity rindranasa Android mahavariana fantatra amin'ny anarana hoe Seagull Assistant. Manolotra ny fampahalalana rehetra momba ny ranomasina sy ny sambo amin'ny antsipiriany izy io, fa aorian'izany dia afaka mangataka an-dranomasina mihitsy aza ianao.
Araka ny fantatrao dia misy ankizy an-taonina maro, izay te hiditra amin'ny ranomasina. Ka io no fomba tsara indrindra hampiarana sy hanatsarana ny fahaizanao. Raha te hampihatra ianao dia tokony hamakivaky ity rindrambaiko ity ary handalina azy rehetra alohan'ny fitsapana ofisialy.
Vonona ny hangataka karazana asa amin'ny sambo na sambo ianao. Raha vantany vao nahalala tsara ny zava-misy sy tarehimarika rehetra ianao. Io no sehatra tsara indrindra, izay manome anao ny fampahalalana fototra sy teknika mifandraika amin'izany.
Misy endri-javatra maro kokoa amin'ity rindranasa ity, izay hozarainay aminao ao amin'ireo fizarana etsy ambany. Raha hampiasa an'ity rindranasa ity ianao dia mijanona miaraka aminay mandritra ny fotoana fohy satria tokony ho fantatrao ny momba an'ity rindranasa ity alohan'ny hampiasanao azy. Raha te hahafantatra na inona na inona momba izany ianao dia afaka mifandray aminay koa.
Topimaso momba ny App Seagull Assistant
Izy io dia fampiharana Android maimaim-poana, izay manome anao ny fampahalalana rehetra mifandraika amin'ny sambo sy ny ranomasina. Izy io dia natao ho an'ireo mpiasa vaovao, izay te hiditra amin'ny ranomasina. Na iza na iza dia afaka manao fanazaran-tena amin'ny alàlan'ity fampiharana ity alohan'ny hidirana amin'ny sehatra ofisialy.
The App fampiharana Amin'ny ankapobeny dia manolotra karazana fitsapana samihafa, izay tsy maintsy ataon'ny olona tsirairay manombana ny tenany. Ny voalohany dia (CBT) Computer Based Traning, amin'ny alalan'izany no ahafahanao manatsara ny fahaizanao. Araka ny fantatrao fa ny teknolojia dia mivoatra haingana, ka fantatra fa miankina amin'izany ny zava-drehetra.
Ka izao, mazàna ny fitsapana ho an'ny asa samihafa dia ampiharina amin'ny alàlan'ny Digital Platforms ary ny Solosaina no sehatra ampiasaina indrindra amin'ny fitsapana. Noho io rafitra io, ity fampiharana ity dia novolavolaina ho an'ny CBT, izay mila anaovanao tombana-tena sy fampiharana ho an'ny fitsapana voalohany.
Ny fomba faharoa dia ny Rafitra Fanabeazana mifototra amin’ny informatika (CES), amin’ny alalan’izany no ahafahana mahazo fampianarana fototra momba ny ranomasina. Araka ny fantatrao dia afaka mahita mora foana amin'ny Internet ianao, saingy mila mahafantatra fomba tsara hahazoana fahalalana ianao. Noho izany, io no fomba hahazoana fahalalana tsara indrindra, momba ny ranomasina sy ny sambo.
anarana Seagull Mpanampy
Size 24.26 MB
Anaran'ny fonosana com.galasoft.ces_crib
Developer Gala Soft
Ilaina ny fanampiana kely indrindra Sandwich gilasy (4.0.1 - 4.0.2)
Endri-javatra manan-danja an'ny Seagull Assistant
Araka ny voalazanay ny sasany amin'ireo endri-javatra ao amin'ny fizarana etsy ambony, dia be loatra izay hitanao. Mila misintona ity fampiharana ity ianao ary mampiasa azy. Ao amin'ny lisitra eto ambany dia hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe amin'ity fampiharana ity aminareo rehetra izahay.
Maimaimpoana ny misintona sy mampiasa
Manome interface tsara ho an'ny mpampiasa izy io
Manolotra CES sy CBT izy io
Fanavaozana ny fampahalalana amin'ny fototra fanehoan-kevitra
Tsy misy doka misy na pop-ups
Misy fiteny roa (Rosiana sy anglisy)
Paompy tokana hizarana azy amin'ny sehatra hafa
Fomba mora ianarana
Ahoana ny fampidinana ny Apk Seagull Assistant Apk?
Azo alaina ao amin'ny fivarotana Google Play izy io, fa raha manana olana amin'ny fampidinana ity fampiharana ity ianao dia azonao atao koa ny misintona azy amin'ity pejy ity. Mila mitady ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay eo ambony sy ambany amin'ity pejy ity.
Tsindrio ny bokotra ary miandry segondra vitsy, ny fampidinana dia hanomboka ho azy. Rehefa vita ny fampidinana dia tsy maintsy avelanao ny 'Loharano tsy fantatra' avy amin'ny Setting Security alohan'ny fametrahana ny dingana. Rehefa vita ny fampandehanana azy dia afaka mametraka izany ianao.
Seagull Assistant no fampiharana tsara indrindra hanatsarana ny fahaizanao sy ny fahalalanao momba ny sambo sy ny ranomasina. Io no sehatra tsara indrindra hanombanana tena alohan'ny karazana fitsapana asa. Inona àry no andrasanao? Ampidino ity fampiharana ity ary tsidiho hatrany ny anay tranonkala ho an'ny fampiharana mahatalanjona kokoa.
Sokajy Apps, fanabeazana Tags App fampiharana, Seagull Mpanampy, Seagull Mpanampy an'ny Apk, Fampiharana Assistant Seagull Post Fikarohana
Fampidinana fampiharana Dabawenyo ho an'ny Android [Vaovao farany 2022]
Eritreritra 2 momba ny "Seagull Assistant Apk Free Download For Android"
May 31, 2021 amin'ny 5: 22 am
Ny rakitra Zip dia mitaky teny miafina, inona ny teny miafina?
Jolay 5, 2021 amin'ny 10: 38 pm
Andro tsara tompoko. Izaho dia miasa ETO amin'ny mpitatitra LNG. Te hianatra fahaiza-manao vaovao aho.